Qoraal Ku Socdo Ibraahim Cali Xaaji Iyo Maxamed Xasan Faqi | Markacadey.com
May 22, 2015	markacadey	-
Qoraal Ku Socdo Ibraahim Cali Xaaji Iyo Maxamed Xasan Faqi
Si fiican ayaa la idinkaga yaqaanaa beesha Biimaal dhexdeeda, wixii la idinku yaqaano oo khayr ama shar ah idinkaba waad ogtihiin, sababtoo oo ah horey ayaa waxaa loo yiri”Fuley Xantiisa Ma Mooga”, qof walbo maqaamka iyo sharafta uu maanta beeshiisa ku dhex leeyahay ayey taariikhda xuseysaa, ruuxii aan wanaag ka teginna habaar iyo lacnad ayaa weligiisa ku socon doono xataa dhimashadiisa kadib.
Waad ogtihiin in Soomaaliya ay qaadatay nidaamka Federalka, ujeedada loo qaatay nidaamka Federalka wuxuu ahaa in Fursad la siiyo dadka Soomaaliyeed ee 55 sano loo diiday inay xil ka qabtaan oo ay maamushaan deegaanada ay u dhasheen, dadka dartooda loo qaatay nidaamka Federaalka waxaa ugu horeeyo beesha Biimaal ee aad ka dhalateen oo xataa laga ilaaliyey in deegaanadooda qaarkood degmo loo aqoonsado.
Masiirka magaalada Marka ha qaldina, hal qoys (reer Cabadi Caruush) oo mooryaan beeshooda gobolada dhexe kasoo aruursaday ma mudna inay xil ka qabtaan magaalada Marka, dalka waa Federal, magaalada Marka waxaa Federalnimo xil uga qaban karo waa beelaha Biimaal iyo 12-ka Koofi. Wararka aan maqalnay ee ah in Habargidir laga iibiyey jagada “Xoghayaha Golaha Deegaanka degmada Marka” waa arin aan ka shaqeyn doonin magaalada Marka, dagaallo kale shacabka ha u horseedina ayaa idin leeyahay, Habargidir shacab ma ka joogo magaalada Marka.
Maxamed Faqi waxaan ku leeyahay “Dhul Biimaal jago ha uga iibsanin Shariif Xasan, hunguri weynidaas nagala joog, Inaad Shariif Xasan ka hesho jago Madaxweyne Kuxigeen waxaa Biimaal uga qiimo badan in deegaanadiisa si xornimo oo xalaal ah u maamusho”.
Ibraahim Cali Xaaji adigana waxaan ku leeyahay “Abtiyaashaada Jeebkaaga ka masruuf ama ka quudi, naga dhaaf xilalka degmooyinka Biimaal ee aad abtiyaashaada ka iibineyso, anaga Habargidir Abti nooma wada ahan, Habargidir waa dad Soomaaliyeed oo deegaano ku leh gobolada dhexe”.
Mar kale ayaa idiin xasuusinayaa in dalka Soomaaliya uu qaatay nidaamka Federalka, Habargidir waxay ku shaqeysataa “Ku Qabso Ku Qadimeysidee”, magaalada Marka maamulkeeda xaq uma lahan in lagu soo daro Habargidir. Markale waxaan idiin sheegayaa in Magaalada Marka gudaheeda ay si rasmi ah u deggan yihiin beelaha kala ah: Biimaal iyo 12-ka Koofi, haddii jago sharafeed la siinaayo beelaha Hawiye waxaa xil lagu sharfi karaa beesha Abgaal inkastoo beesha Biimaal aan hal xil looga sharfin maamulka gobolka Banaadir.
Haddii aad si nadiif ah ugu shaqeyn karin shacabka masaakiinta ee beesha Biimaal farahiina kala baxa arimaha beesha Biimaal ayaa idiin leeyahay, labadiinaba waxaad ku kala magacaaban tihiin jagooyin kumeel gaar ah oo kala ah Wasiir berri shaqada laga fadhiisinaayo iyo Kusimaha Suldaanka Biimaal. Maanta wado xun ha u jideynina masiirka dadkiina, xishooda, dad idinka garaad fiican wey ku jiraan beesha ee inta ay goori goor tahay ka jooga wadadan xun.
Ma nin Taariikhyahan Talyaani ah ayaa idinkaga aqoon badan Deegaanada beesha Biimaal ee aad idinka ka dhalateen? Gaalka Talyaani sida ku cad sawirka hoose ayuu qoray sanadkii 1935-ka isagoo ka waramaayey dadkii uu ku arkay magaalada Marka: